Dapoxetine HCL （129938-20-1） ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းသူစက်ရုံ
Dapoxetine ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်သည်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကိုကုသရန်အထူးတီထွင်ထားသောအထူး serotonin ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည့်ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများစွာအရ serotonin ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည့် inhibitors (SSRIs) နှင့် SSRI ကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည့်ဆေးဝါးများသည်ဤအခြေအနေကိုကုသရန်အတွက်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းဆရာဝန်များကဤအရာအတွက်သုံးသည်။ ဒေသခံထုံဆေးအေးဂျင့်များနှင့်အတူလိမ်း desensitizing ကုထုံးလည်းအချိန်မတန်သုက်သုက်လွှတ်နှင့်အတူအချို့သောယောက်ျားအတွက်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသူက ereptile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသူကအရမ်းသုတ်ရည်လွှတ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအောင်မြင်စွာကုသလျှင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ လူနာတွင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသော်လည်းအချိန်မတန်သေးသောသုက်လွှတ်မှုမရှိပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးရှိသောဆေးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မဟုတ် anorgasmia ကိုဖြစ်စေခြင်းမှရှောင်ရှားရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
Dapoxetine hydrochloride အမှုန့်အခြေစိုက်စခန်းသတင်းအချက်အလက်
အမည် Dapoxetine hydrochloride အမှုန့်
မော်လီကျူးအလေးချိန် 258.62 ဂရမ် / mol
အရည်ပျော်မှတ် 175-179 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
1.Dapoxetine hydrochloride အမှုန့်အထွေထွေဖော်ပြချက်?
Dapoxetine ကုန်ကြမ်းသည်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုအတွက်အထူးတီထွင်ထားသောအထူး serotonin ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည့်ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သန္ဓေတည်ရန်အချိန်ယူပြီးသုတ်ရည်လွှတ်မှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်အလွန်လျင်မြန်စွာစတင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်နေ့စဉ်လိင်စိတ်ထက်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်မျှော်လင့်သည့်အခါ၎င်းကိုယူသည်။ သင်သည်လိင်မဆက်ဆံမီ ၁-၃ နာရီကြာသည်။
သုတေသနအသစ်အရ Dapoxetine အမှုန့်သည်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း (PE) အတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်သည်။
PE ကုသမှုအတွက်တီထွင်ထားသောတစ်ခုတည်းသော serotonin ပြန်လည်သောက်သုံးမှုတားစီးမှု (SSRI) သည် Dapoxetine ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနိုင်ငံပေါင်း ၆၀ တွင်အတည်ပြုထားသည်။ PE ကိုလိင်ကုထုံး၊ ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဤချဉ်းကပ်နည်းများဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (အိုင်အက်စ်အက်စ်) သည် PE ကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။ Lifelong PE သည်သန္ဓေတည်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမျိုးသား၏ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံမှစတင်ပြီးထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်း၏တစ်မိနစ်မတိုင်မှီသို့မဟုတ်အတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရရှိသော PE သန္ဓေသားလောင်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးမိနစ်ခန့်အကြာတွင်ပုံမှန်သန္ဓေတည်ခြင်းရှိခဲ့သည်။
Dapoxetine hydrochloride အမှုန့်သောက်သုံးသော
ကွဲပြားခြားနားသောလူနာများအတွက်ထိုးကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင့်ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သို့မဟုတ်ဤဆေးကိုမသောက်မီတံဆိပ်ပေါ်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များကိုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ။ အောက်ပါအချက်အလက်များတွင်ဤဆေး၏ပျမ်းမျှဆေးများသာပါဝင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ဆေးထိုးမှုနှင့်မတူပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးခြင်းမရှိဘဲဆေးကိုချိန်ညှိပါ။ ဆရာဝန်ကသင့်အားဤသို့မပြောလျှင်ဆေးကိုမပြောင်းပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား (၁၈ နှစ်မှ ၆၄ နှစ်) အတွင်းရှိလူနာများအတွက်အကြံပြုထားချက်မှာလိင်မှုကိစ္စမပြုမီ Dapoxetine အမှုန့်တစ်နေ့မှသုံးနာရီကြာသင့်သည်။
Dapoxetine အမှုန့်စတင်သောက်ရန်အကြံပြုထားသောပမာဏမှာ ၃၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မထိရောက်ပါကသင်၏ဆရာ ၀ န်သည်သင့်ဆေးကို ၆၀ မီလီဂရမ်အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်အနိမ့်ဆေးပမာဏနှင့်အတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသင်မကြုံတွေ့ရမှသာပြုလုပ်သင့်သည်။
သင်တက်ဘလက်ကိုအစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဖြစ်စေယူနိုင်သည်။ မူးဝြေခင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်း (ခါးသောအရသာရရှိခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်မဝါးပါနှင့်) ။
အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်၊ ဤထုတ်ကုန်ကို ၆၅ နှစ်အတွင်းအကဲဖြတ်ခြင်းမပြုရသေးသောလူအုပ်စုအပေါ်လူနာများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုဤလူ ဦး ရေတွင်အသုံးပြုရန်အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုရှိသည့်လူနာများအတွက်အလွန်အမင်းကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုရှိသောလူနာများသည်ဤဆေးကိုသောက်သောအခါဆေးကိုချိန်ညှိရန်မလိုအပ်သော်လည်းသတိထားရမည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်ပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ဒဏ်သင့်သည့်လူနာများအတွက်မထောက်ခံပါ။
Dapoxetine Hydrochloride အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ,
အောက်ပါတို့သည် Dapoxetine Hydrochloride နှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးများနှင့် ၄ င်းတို့၏ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုမတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
အလွန်အသုံးများသော Dapoxetine Hydrochloride ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (လူ ၁၀ ဦး တွင် ၁ ဦး ထက်ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်)
အဖြစ်များသည့် Dapoxetine Hydrochloride ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (လူ ၁၀၀ တွင် ၁ ယောက်လျှင် ၁ ယောက်မှ ၁ ယောက်အထိသာသက်ရောက်မှုရှိသည်)
ပင်ပန်းသို့မဟုတ်အိပ်ချင်ခံစားရသည်။ အကယ်၍ ထိခိုက်ပါကစက်ယန္တရားမမောင်းနှင်ပါနှင့်။
တံတွေးများနှင့်အပ်များသို့မဟုတ်ပင့်ကူအာရုံခံခြင်း။ နားများ (tinnitus) တွင်အခြားဆူညံသံများ။
Flushing.Difficulty sleeping (အိပ်မပျော်) ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအိပ်မက်များ။
လိင် drive ကိုလျှော့ချ။
စိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာပြgettingနာများ (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) ။
ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုနှင့်အဆင်မပြေခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊
အဆန်းမဟုတ်သော Dapoxetine အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (လူ ၁၀၀၀ တွင် ၁ ဦး မှ ၁ ယောက်အထိ ၁ ယောက်ထိသာထိခိုက်သည်)
အိပ်ရာမှထခြင်းမှထသည့်အခါမူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်မောခြင်း။ သင်၏တက်ဘလက်ကိုသောက်နေစဉ်ရေတစ်ခွက်သောက်ရန်သေချာစေပြီး၊ သင်သည်ကြာမြင့်စွာထိုင်နေသည် (သို့) အိပ်နေလျှင်ဖြည်းဖြည်းမတ်တပ်ရပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပါ။ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းပြောင်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်ချွေးထွက်ခြင်းကဲ့သို့သောသတိလစ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်ရရှိပါက၊ ရောဂါလက္ခဏာများမကုန်မချင်းသင်၏ခြေထောက်များအကြားအိပ်ယာထိုင်ပါ။
- Dapoxetine hydrochloride အမှုန့်ကိုမည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူရမည်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည် Dapoxetine အမှုန့်ကုန်ကြမ်းကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dapoxetine hydrochloridel အမှုန့်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း၊ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
သင်၏တိကျသောလိုအပ်ချက်နှင့်အညီအော်ဒါမှာယူမှုကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်နှစ်သက်မည်ဟုအာမခံချက်များမှာမြန်ဆန်ပါသည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုရန် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်
Dapoxetine hydrochloride အညွှန်းကိန်း
McMahon, CG (အောက်တိုဘာ 2012) ။ "Dapoxetine - အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ရွေးစရာအသစ်" ။ Urology အတွက်ကုထုံးတိုးတက်လာ။4(5): 233-51 ။ Doi: 10.1177 / 1756287212453866 ။ PMC 3441133. PMID 23024705 ။
အစိုးရအေ (2010) ။ Dapoxetine အတွက်သြစတြေးလျပြည်သူ့အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာ (o o ။ H.a။ ATG Administration, Trans ။ )
Andersson, KE; Mulhall, JP & Wyllie, MG (2006) ။ “ dapoxetine ၏ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံဆိုင်ရာလက္ခဏာများ - အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကို 'On-demand' ကုသမှုအတွက်ဆေးဝါးအသစ် "။ BJU အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ 97 (2): 311-315 ။ Doi: 10.1111 / J.1464-410x.2006.05911.X ။ PMID 16430636 ။
McCarty, အီး & Dinsmore, ဒဗလျူ (2012) ။ “ Dapoxetine - အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ Core Evid ။ ၇: ၁-၁၄ ။ Doi:7/ CE.S1 ။ PMC 14. PMID 10.2147 ။
“ Furiex Pharma က Priligy ကိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ တချို့က Menarini ကိုရောင်းတယ်” Pharma ပေးစာ။ မေလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်၊
Erectile Dysfunction (ED) ကိုကုသရန်အတွက် ၂၀၂၁ လိင်အရှိန်အဝါတိုးပွားစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးလမ်းညွှန်.